Madaxweynaha DFS Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Talyaaniga. | Radio Borama
You are here : Radio Borama » News » Madaxweynaha DFS Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Talyaaniga.
Madaxweynaha DFS Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Talyaaniga.
Posted by Shucayb on November 19th, 2018 11:05 AM | News
Moqdisho (SBN) Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Fa rmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Talyaaniga.
Madaxweynaha iyo madaxda dalka Talyaaniga ayaa ka wada hadli doona dib u xoojinta iskaashiga iyo xidhiidhkii labada dal ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Sidoo kale, labada dhinac waxay isla lafo-guri doonaan danaha kala geddisan ee ay wadaagaan labada dal iyo sidii looga miradhalin lahaa.
“Dalka Talyaaniga waxa aynu wadaagnaa xidhiidh taariikhi ah, dowladdayduna waxay dadaal gelinaysaa sidii aan dib ugu xoojin lahayn, maadaama ay dowladda Talyaanigu kaalin weyn ku leedahay dib-u-dhiska Soomaaliya, saaxiibbo dhawna ay yihiin labada shacab.” Ayuu yidhi Madaxweyne Farmaajo.
Dhankooda, Masuuliyiinta iyo Diblumaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah wafidiga Madaxweynaha ayaa kulamo ku qotoma dib u habaynta xidhiidhka labada dal iyo iskaashiga waxa ay la yeelan doonaan masuuliyiinta dhiggooda ah ee dalkaas.
Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa waxaa ka dhaxeeya xidhiidh soo jireen ah, taas ayaana saldhig u ah dadaallada joogtada ah ee madaxda labada dal ay ugu jiraan ka miradhalinta qorsheyaasha iskaashi iyo xaqiijinta danaha ay wadaagaan labada shacab ee saaxiibbada ah.
« Daawo Safarka uu madaxweyne Biixi shalay ugu baxay qaar ka mid ah gobalada Dalka ayaa waxaa ay bulshada reer Somaliland is weydiinayaan safarkaasi wax ma ka bedeli doonaa duruufaha siyaadeed ee ku gadamaan gobaladaasi
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Xadhiga Ka Haray Dhisme Cusub Oo Lagu Kordhiyey Hay’adda Barakacayaasha »